Waa aragti naadir ah oo ka jirta aagga ay colaadduhu hareeyeen - Wardeeq 24 TV Waa aragti naadir ah oo ka jirta aagga ay colaadduhu hareeyeen Wardeeq 24 TV
Home Xulashada Waa aragti naadir ah oo ka jirta aagga ay colaadduhu hareeyeen
Waa aragti naadir ah oo ka jirta aagga ay colaadduhu hareeyeen
Tan iyo markii iskahorimaadku ka qarxay gobolka woqooyiga Tigreega ee Itoobiya sanadkii hore, wuxuu si aad ah ugu xaddidan yahay saxafiyiinta iyo hay’adaha gargaarka si isku mid ah Weriyaha wardeeq news-da ballay ayaa ugu dambeyn loo oggolaaday inuu tago gobolka, halkaas oo uu ku soo arkay xaalad bani’aadamnimo oo aad u xun.
Hay’adaha gargaarka ayaa qiyaasaya in ka badan 200,000 oo qof ay haatan ku nool yihiin xeryaha kumeel gaarka ah ee magaalada. Qaar badan oo ka mid ahi waa haween iyo carruur.
Dadkii ugu horreeyay ee yimid waxay yimaadeen bishii Nofeembar markii dagaalku qarxay. Inta badan waxay ka yimaadeen koonfurta iyo koonfur-galbeed ee dhulka hoose Tigreega oo ahaa goobihii lagu diriray maalmihii hore.
Iska hor imaadkan ayaa ka dhashay xiisado muddo dheer soo jiitamayay oo u dhaxeeyay dowladda federaalka ee ra’iisul wasaare Abiy Ahmed iyo taliyayaashii hore ee gobolka, Jabhadda Xoreynta Dadka Tigreega (TPLF) – oo ah awoodda ugu badan ee siyaasadda Itoobiya ilaa uu Mr Abiy xukunka qabtay 2018.
Betlehem Tesfaye oo lix jir ah, oo ka soo qaxday agagaarka Aksum, oo qiyaastii 50km (31 mayl) u jirta bariga, ayaa labadeeda lugood ku weyday iskahorimaadka. Hooyadeed waxaa lagu dilay isla qaraxaas.
Aabaheed wuxuu kharashaadkiisii ​​ku qaatay dawaynteeda. Haddana ma garanayo sida uu ugu heli karo lugaha gacmaha loogu talagalay iyada.
Sidaa si la mid ah magaalooyinka kale iyo magaalooyinka kale ee Tigreega oo dhan, Shire wuxuu hoy u noqday boqolaal kun oo dad nugul ah oo guryahooda laga raray isku dhacyo calaamadeeyay eedeymaha xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan xasuuq iyo kufsi nidaamsan
Laakiin magaaladan oo ka kooban 170,000 oo qof, oo ku taal qaybta dhexe ee gobolka, ayaa si gaar ah u dhibtoonaysa. Kadib markii Mr Abiy uu ku dhawaaqay guluf militari weerar lagu qaaday xero ciidan oo kutaala caasimada gobolka, Mekelle, dagaalka ayaa ka qarxay dhinacyo badan waxaana ku lug lahaa xoogag kala duwan.
Koonfur-galbeed ee Tigray ciidan hubaysan oo ka socda gobolka Axmaarada ee dariska la ah waxay ku biireen ciidanka federaalka ee ka dhanka ah kooxda TPLF.
Atsede Mebrahtom oo lixdan iyo shan jir ah ayaa dib u xusuusatay maalmahaas cabsi. Waxay ku nooleyd magaalo la yiraahdo Daansha, oo ay taageeri jireen labadeeda gabdhood iyo qoysaskooda. Waxay isticmaaleen qaar ka mid ah gawaarida waaweyn iyo basaska badan oo ay ka buuxaan dad ay ku dhacday masiibo isku mid ah markay awoodaan.
“Waan nasan kari weynay,” ayay tiri. Waxay ahaayeen kuwo harraadsan oo gaajaysan. “Waxaad codsanaysaan xoogaa yar oo roodhi ah waxaadna siisaan ilmo. Koobab ayaan amaahannay si aan carruurta biyo uga siino.”
Waxay sheegtay inay aragtay meydad jiifa oo aan la aasin intii ay socdeen – sawir ay adag tahay in la iloobo.
Kuma faraxsani, ayay ii sheegtaa, laakiin weli waan nool nahay. Maalmo ayaa soo noqda oo taga, nasiib ayaan leenahay maanaan dhiman.
Qaar kamid ah ayaa sheegaya in lagasoo qasbay guryahoodii meelaha ay hada maamulaan xoogaga Amxaarada. Maamulka gobolka Amxaarada ayaa sheegaya in aagagaas si xoog ah looga qaatay gobolka markii TPLF xukunka qabsatay sagaashamaadkii.
Qeyb ka mid ah gargaarka ayaa lagu bixiyaa xeryaha. Laakiin dadku waxay leeyihiin kuma filna. Maamulka kumeel gaarka ah ee Tigray, oo ay magacawday dawlada dhexe kadib markii xukunka laga tuuray TPLF, ayaa sheegay in ilaa afar milyan oo qof ay ubaahanyihiin gargaar gobolka – in kabadan kalabar dadka Tigray ah.
Etenesh Nigussie, oo ah afhayeenka maamulka, ayaa sheegtay in deeq bixiyaasha iyo hay’adaha samafalka looga baahan yahay inay dadaalkooda sii xoojiyaan.
Waxaa jiray baaqyo caalami ah oo loogu talagalay in la helo gargaar bani’aadamnimo oo aan xadidnayn.
Ku noqoshada Shiire, waxaan la kulmayaa Leteberhan Assefa, oo ka yimid Humera, oo ah magaalo yar oo 450km u jirta, una dhow xadka Itoobiya la wadaagto Suudaan iyo Ereteriya.
Wax yar ka hor intaan colaaddu bilaabmin, gabadheeda ayaa qalliin lagu qalay markii ay carareenna waxay ahayd inay nuujiso gabadheeda soo kabsatay oo ay sidato ilmaha cusub ee dhashay. Xerooyinka dhexdeeda, waxay sheegtay inay dareentay xoogaa nabadgalyo ah laakiin aan la daryeelin
Previous articleTaiwan ayaa lumisay laba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah sida shilka dhacay
Next articleVenezuela waxay ku dhawaaqday ‘karantiil xagjir ah’ iyada oo kor u kacday coronavirus
Isbedelka Ciyaaraha ‘: Shiinaha ayaa joojinaya maalgelinta mashaariicda dhuxusha ee dibadda
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay in Shiinuhu uusan mar dambe maalgelin doonin dhismaha mashaariicda cusub ee korontada laga dhaliyo dhuxusha, taas oo ka...